Books Review – Pann Satt Lann Books
Review by Khant Si Thu
စထွက်တဲ့အချိန်ထဲကမှာယူခဲ့ပြီးဂျောင်ထိုးထားခဲ့တာပါ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၂နှစ်အကြာမှာမှ စာအုပ်လေးကိုဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ချက်ချင်းမဖတ်ခဲ့မိတဲ့အတွက် နောင်တများစွာရမိပါတယ် အရမ်းကောင်းတဲ့စာအုပ်လေးပါ စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့်စာအုပ်လေးဆိုပေမယ့် ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရှူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Psychoသဘောတရားတွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ် ဇာတ်ကောင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ characterလေးတွေဟာ လက်ရှိဘဝမှာတွေ့ကြုံနေရတာတွေနဲ့တစ်ထပ်ထဲကျမှာပါ ဝယ်ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ် ပေးရတဲ့စျေးနဲ့ပြန်ရမှာကအများကြီးမို့ အရမ်းကိုတန်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါရစေ ဒီလောက်ညွှန်းနေတာ တကယ့်ကိုဖတ်ကြည့်စေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ပါ သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲစာအုပ်လေးလဲဒီနှစ်ထဲ…
မနက်စာ... အာဟာရ (၁)( ပဉ္စမ-အကြိမ်ထုတ်)
Review by Mi Shweyee Win Htet
ဆရာမ မွန်ဟော်စီရဲ့ မနက်စာအာဟာရ(၁) ...... 📖📖📖 ဘဝမှာ ထိန်းချုပ်ရခက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကို ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပေးရမလဲ။ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ အချိန်ကို ဖယ်ပြီး ဘဝမှာ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိနေထိုင်တတ်ဖို့ ရှင်သန်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးတွေ၊ စိတ်အေးချမ်းမှု စိတ်ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုရရှိစေတဲ့ အရာတွေကို ဆရာမက ဝေမျှပေးထားပါတယ်။…
#Review (1+1=3)?? #ဆရာချမ်းမြေ့ဝင်း ခက်ခဲတဲ့ သချ်ာပုစ္ဆာတစ်ခုကို တွက်ချက်နေရရင် စိတ်ဝင်စားနေရတဲ့ ကိုယ့်အတွက်ကတော့ ဒီစာအုပ်နဲ့ အရမ်းကို လိုက်ဖက်ပါတယ်။စဥ်းစားတွေးခေါ်နေရတာကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဒီစာအုပ်မှာ မသိသေးတဲ့ အချက်အလက် တွေ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေ အများကြီးရှိနေပြီး ပုစ္စာတစ်ပုဒ်ကို ဖြေရှင်းရတဲ့အခါ အဖြေကို…
Review by Soe Sandi Linn
ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ဓမ္မသာမိ (အောက်စဖို့ဒ်ဆရာတော်)ရဲ့"ပျော်နိုင်ပါရဲ့နဲ့ပျော်ဖို့မေ့နေသူများ"စာအုပ်အတွေးတစ်စ ???????????????? ခုတလောမှာလည်း ဆယ်တန်းစာမေးပွဲအောင်စာရင်းတွေထွက်ထားတော့...အောင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကျတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်.....emotion တွေ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြမှာပါ....ဆရာတော်ရဲ့"ပျော်နိုင်ပါရဲ့နဲ့ပျော်ဖို့မေ့နေသူများ"စာအုပ်ကိုဖတ်ရင်းနဲ့ ကျွန်မရဲ့ အတိတ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ပြန်အမှတ်ရပြီး အသိတရားတစ်ခုရလိုက်ပါတယ်....ကျွန်မဆယ်တန်းအောင်တော့.....ပျော်ရွှင်မှု(မုဒိတာ)အရသာကို မခံစားခဲ့မိဘူး....ကျွန်မကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တာတွေကို အသိအမှတ်မပြုဘဲ ကျွန်မရခဲ့တဲ့ 80%ကိုမေ့နေပြီး မရခဲ့တဲ့ 20% အတွက်ကိုပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျေနပ်နိုင်…
Review by Kyi Lai Lai Soe
လူတစ်ယောက်စီတိုင်းမှာ သူတို့တွေရဲ့အမြင်ကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ အရာများစွာရှိပါတယ် ။အခြေအနေအမျိုးမျိုးအပေါ်မှာလည်း မူတည်ပြီး သူတို့ရဲ့အမြင်တွေ၊အယူအဆတွေက ပြောင်းလဲသွားကြပါတယ် ။ ကျွန်မရဲ့အယူအဆ၊အမြင်တွေကို ပြောင်းလဲအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာကတော့ စာအုပ်တွေဘဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီနေ့မှာလည်း ကျွန်မရဲ့အမြင်‌တွေကိုပြောင်း‌စေတဲ့စာအုပ် တစ်အုပ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။ စာအုပ်လေးရဲ့နာမည်ကတော့…
Review by Zin Mee Mee Htun (@Readbychal)
ဆရာမ မွန်ဟော်စီရဲ့ (၁၀) အုပ်မြောက်စာအုပ်လေးဖြစ်တဲ့ “မနက်စာအာဟာရ” တဲ့ ? ဆရာမ မွန်ဟော်စီကို စသိခဲ့ရတာက အမေစုအကြောင်းရေးထားတဲ့ “ပေးဆပ်သူရဲ့ နှလုံးသားဝိဉာဉ်” ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးနဲ့ပါ။ အဲဒီတုန်းကလည်း မျက်ရည်လည်ရွှဲနဲ့ ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်တော့ ဆရာမ…
Review by Nay Thu
စာရေးသူရဲ့ ငယ်စဉ်ဘဝက ကျောင်းစိမ်း ဝတ်စုံတစ်စုံတည်းကို အစ်ကိုတစ်လှည့် ညီတစ်လှည့်ဝတ်ခဲ့ရပြီး၊ ဘုရားပေါ်မှာ ဂွေးသီးလိုက်ရောင်းရတဲ့ ဘဝမှ အောင်မြင်တဲ့ Eng:ဆရာ၊ ဘာသာပြန်ဆရာ၊ စာရေးဆရာဘဝ ရောက်ရှိခဲ့ပုံကို ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်များနဲ့ ပညာပေးရေးဖွဲ့ထားပါသည်။ * ကတိတည်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်း၊ *…
❤️❤️❤️အကြိုက်ဆုံးစာသားလေးကိုပဲ ရေးလိုက်တော့မယ်.... အာဏာရှိတဲ့လူတွေဟာ အများအားဖြင့် ခေါင်းညိမ့်တတ်တဲ့ လူတွေနဲ့ပဲ ၀န်းရံနေတတ်တယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းက သူတို့ကို အရေးပါတဲ့သူလို့ ခံစားစေရတာကိုး။ သင့်အနီးမှာရှိတဲ့ လူတွေအားလုံးဟာ သင်ပြောသမျှခေါင်းညိမ့်နေမယ်ဆိုရင် အဲဒီလူတွေဟာ သင့်အပေါ် သစ္စာရှိသူတွေ မဟုတ်ဘဲ အခွင့်အရေးသမားတွေသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။…
Review by Mon Mon Aung
#မနက်စာအာဟာရ(၁) #MorningVitamins (1) ဒီနေ့ မွန်မွန်ပြောပြမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ ဆရာမ မွန်ဟော်စီရဲ့ မနက်စာအာဟာရဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မွန်မွန်တို့တွေ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာစေဖို့ အာဟာရဖြစ်မယ့် အစားအစာတွေစားရသလို ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာလည်း မနက်အိပ်ယာထမှစလို့ ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေ လတ်ဆက်လန်းဆန်းနေစေဖို့ ဦးနှောက် အာဟာရ ဖြစ်စေတဲ့…
Review by ရွှေဇင်ခိုင်ဦး
ရင်ထဲမှာအပူတွေများပြီး မချိမဆံ့ခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာ ဒီစာအုပ်လေးကို ရှာတွေ့ခဲ့တာ တကယ့်ကိုအဖိုးမဖြတ်နိုင်ဆုလာဒ်ပါပဲ စာဖတ်မြန်တဲ့ကိုယ်တောင် ၇ရက်တိတိအချိန်ယူပြီး တစ်ကြောင်းချင်းစီကိုအထပ်ထပ်အခါခါဖတ်ပြီး တွေးယူရတဲ့အထိပါပဲ စာတစ်ပိုဒ်ဖတ်ပြီးတိုင်း အပူတစ်ခုလျှော့သွားသလိုခံစားရတယ် တစ်အုပ်လုံးဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါ ရင်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းသွားသလိုခံစားရတယ် စိတ်ကိုထားတတ်အောင်သင်ပေးတဲ့ စိတ်ပညာစာအုပ် လို့တောင်တင်စားချင်ပါတယ် စာအုပ်အမည်နဲ့ရလာဒ်က လုံးဝကိုပြီးပြည့်စုံပြီးလိုက်ဖက်လွန်းပါတယ် ‌ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ဆရာကိုလဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်